शर्तहरू वैचारिक अभिव्यक्तिहरू हुन जुन तपाईँंले कागजात भित्र फाँटहरू र सेक्सनहरू को प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यधपी निम्न उदाहरणहरू फाँटहरूमा लागू हुन्छन, तिनीहरू सेक्सनहरूमा पनि लागू हुन्छन।
तपाईँं तलका फाँट प्रकारहरूका लागि अवस्थाहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ:
अवस्थाको पाठ: यदि अवस्था ठीक छ भने पाठ A प्रदर्शन गर्नुहोस्, वा पाठ B यदि अवस्था गलत छ भने
लुकेको पाठ: यदि अवस्था ठीक छ भने फाँटको सामाग्रीहरू लुकाउनुहोस्.
लुकेको अनुच्छेद: यदि अवस्था ठीक छ भने अनुच्छेद लुकाउनुहोस्
कुनै रेकर्ड र अर्को रेकर्ड: डाटाबेस रेकर्डहरूमा पहुँच नियन्त्रण गर्दछ.
शर्त परिभाषित गर्ने सबै भन्दा सरल बाटो भनेको निम्न मानहरू प्रयोग गरेर एउटा शर्त बाकसमा वैचारिक अभिव्यक्तिहरू सिधै टाइप गर्नु हो :
अवस्था जहिले पनि मिल्छ. अवस्था पाठ जस्तै तपाईँं कुनै पनि मान ० सँग बराबर छैन भने तपाईँं प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ
अवस्था मिल्दैन. तपाईँं मान ० पनि प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ.
यदि तपाईँंले शर्त बाकस खाली छोड्नुभएमा, शर्त नमिलेको रूपमा व्याख्या गरिन्छ।
जब तपाईँंले एउटा शर्त परिभाषित गर्नुहुन्छ,एउटा सूत्र,नामद्वारा तुलनात्मक सञ्चालकहरू,गणितिय र तथ्याङ्किय कार्यहरू,सङ्ख्या ढाँचाहरू,चलहरू र अचलहरू परिभाषित गर्नलाई उही तत्वहरूि प्रयोग गर्नुहो।स
जब तपाईँंले अवस्था परिभाषित गर्नु भयो भने तपाईँंले तलका चलका प्रकारहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
पूर्वपरिभाषित LibreOffice चलहरू जसले कागजात गुणहरूमा तथ्याङ्कहरू प्रयोग गर्दछ
अनुकूल चलहरू, जुन "Set variable" फाँट सँग निर्माण गरिएको छ
प्रयोगकर्ता डेटामा आधारित चलहरू
चलहरू डाटाबेस फाँटहरूको सामाग्रीमा आधारित
तपाईँं भित्री चलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, जस्तै पृष्ठ र अध्याया, अवस्था अभिब्यक्त्तिमा
अवस्थाहरू र चलहरू
तलका उदाहरणहरूले चल प्रयोग गर्दछ जसलाई "x" भनिन्छ:
x == १ or x EQ १
अवस्था ठीक छ यदि "x" १ सँग बराबर छ भने.
x != १ वा x NEQ १
अवस्था ठीक छ यदि "x" १ सँग बराबर छैन भने.
sinx == ०
अवस्था ठीक छ यदि "x" pi को गुणन हो भने.
स्ट्रिङहरू सँग तुलनात्मक सञ्चालकहरू प्रयोग गर्नलाई,संकार्य द्वि-उद्धरण चिनोहरूद्वारा बाध्नै पर्दछ:
x == "ABC" वा x EQ "ABC"
यदि चल "x" मा (सत्य) "ABC" स्ट्रिङ सम्मितित भएमा वा (गल्ती) नभएमा जाँच गर्दछ।
x == "" वा x EQ ""
!x वा NOT x
जाँच्दछ कि यदि "x" ले खाली स्ट्रिङ समावेश गरेको छ.
यो अवस्थामा "equal" तुलनात्मक सञ्चालक दुई बराबर सङ्केतहरू (==) ले प्रतिनीधित्व गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि, यदि तपाईँले "x" चललाई १ को मान सँग परिभाषित गर्नु भएमा, तपाईँले अवस्थालाई x==1 को रूपमा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
तलको तालिकाले प्रयोगकर्ता डेटा चलहरू र त्यसको अर्थ सूची गर्दछ:
व्यापार टेलिफोन नंबर
घर टेलिफोन नंबर
राज्य (सबै LibreOffice संस्करणहरूमा होइन)
उदाहरणका लागि, एउटा अनुच्छेद,पाठ वा छनोट एउटा प्रयोगकर्ता बाट "LM" जस्तै विशेष सुरु अक्षरसँग लुकाउनलाई शर्त: user_initials=="LM" प्रविष्टी गर्नुहोस्।
अवस्थाहरू र डाटाबेस फाँटहरू
तपाईँ पहुँच गर्ने डाटाबेस, वा डाटाबेस फाँटहरूका लागि शर्तहरूलाई परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि, तपाईँ शर्तबाट डाटाबेस फाँटको सामाग्रि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, वा युक्तिसङ्गत अभिव्यक्तिहरू मा डाटाबेस फाँटहरू प्रयोग गर्नुहोस् । निम्न तालिका सूचीमा शर्तहरू मा प्रयोग गर्ने डाटाबेसहरू का अझ बढी उदाहरणहरू छन्:
डाटाबेस.तालिका.कम्पनी NEQ ""
डाटाबेस.तालिका.कम्पनी != ""
अवस्था ठीक छ यदि COMPANY फाँट खाली छैन भने. (पहिलो उदाहरणमा, कुनै सञ्चालनकर्ता चाहिँदैन.)
डाटाबेस.तालिका.कम्पनी EQ ""
यदि COMPANY फाँट खाली भएमा TRUE फर्काउँछ। (विस्मयबोधक चिन्हले वैचारिक NOT प्रतिनीधित्व गर्दछ।)
डाटाबेस.तालिका.कम्पनी !="Sun Microsystems"
डाटाबेस.तालिका.कम्पनी NEQ "सन माइक्रोसिस्टम्स"
यदि COMPANY फाँटमा हालको प्रविष्टी "सन माइक्रोसिस्टम्स" भएमा TRUE फर्काउँछ।
डाटाबेस.तालिका पहिलोनाम AND डाटाबेस.तालिका.नाम
फर्काउँछ TRUE यदि रेक्रडले पहिलो र अन्तिम नाम समावेश गर्दछ.
बुलियन NOT "!" र तुलनात्मक सञ्चालक असमान "!=" (NEQ) बिचको भिन्नता टिपोट गर्नुहोस्।
जब तपाईँ शर्तमा डाटाबेस फाँट सँग सान्धर्वित गर्नुहुन्छ, डाटाबेसनाम.तालिकानाम.फाँटनाम बाट प्रयोग गर्नुहोस् ।.यदि नाहरू मध्ये एउटाले क्यारेक्टर समाबेस गर्दछ भने त्यो सञ्चालक हो, त्यस्तै घटाउ सङ्केत (-) वर्ग कोष्ठकहरू मा बन्द गर्ने नाम,उदाहरणको , डाटाबेसनाम.[Table-name].फाँटनाम.फाँट नामहरूको भित्र पट्टी खाली स्थान कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस् ।
उदाहरण: खाली डाटाबेस फाँट लुकाउँदा
तपाईँंले खाली फाँटलाई लुकाउने एउटाशर्त सिर्जना गर्न चाहन सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि,यदि केही डेटा रेकर्डहरूका लागि COMPANY फाँट खाली भएमा ।
लुकेको अनुच्छेद बाकस चयन गर्नुहोस् र निम्न शर्त टाइप गर्नुहोस्: ठेगानापुस्तक.ठेगानाहरू.कम्पनी EQ ""
वा तलको टाइप गर्नुहोस्
यदि COMPANY डाटाबेस फाँट खाली छ भने, अवस्था ठीक छ र अनुच्छेद लुकेको छ.
फाँटहरूमा अवस्थाहरूको उदाहरणहरू
निम्न उदाहरणले शर्त बुझाउने पाठ फाँट प्रयोग गर्दछ,यध्यपि तिनीहरूले शर्त सँग लिङ्क गर्न सक्ने कुनै फाँटहरूलाई लागू गर्न सक्दछन् ।वाक्य संरचनाले प्रयोग भएका लुकेको पाठ, लुकेको अनुच्छेदको , कुनै रेकर्ड वा अर्को रेकर्ड फाँट लागि र शर्तका लागि प्रयोग गर्दछ ।
पृष्ठ सङ्ख्याहरूमा आधारित अवस्था पाठ प्रदर्शनका लागि:
रोज्नुहोस् गर्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य, र क्लिक गर्नुहोस् प्रकार्य ट्याब.
प्रकार सूचीमा, क्लिक गर्नुहोस् "Conditional text".
अवस्था बाकसमा, टाइप गर्नुहोस् "page == 1".
पछि बाकसमा, टाइप गर्नुहोस् "There is only one page".
Or बाकसमा, टाइप गर्नुहोस् "There are several pages".
प्रयोगकर्ता-परिभाषित चलमा आधारित अवस्था पाठ प्रदर्शन गर्नका लागि
रोज्नुहोस् गर्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य, र क्लिक गर्नुहोस् चलहरू ट्याब.
प्रकार सूचीमा, क्लिक गर्नुहोस् "Set Variable".
नाम बाकसमा, टाइप गर्नुहोस् "Profit".
मान बाकसमा, टाइप गर्नुहोस् "5000".
प्रकार्य ट्याबहरू क्लिक गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् "Conditional text" प्रकार सूची.
अवस्थाबाकसमा, टाइप गर्नुहोस् "Profit < 5000".
पछि बाकसमा, टाइप गर्नुहोस् "Target is not met".
Or बाकसमा, टाइप गर्नुहोस् "Target is met".
"Profit" चलको सामाग्रीहरू सम्पादन गर्न, चल फाँटमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्.
डाटाबेस फाँटको सामाग्रीहरूमा आधारित अवस्था पाठ प्रदर्शन गर्न:
रोज्नुहोस् गर्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य, र क्लिक गर्नुहोस् डाटाबेस ट्याब.
प्रकार सूचीमा, क्लिक गर्नुहोस् "Mail merge fields".
डाटाबेस छनोट बाकसमा, एउटा ठेगाना पुस्तकमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्,"पहिलो नाम" क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि घुसाउनुहोस् क्लिक गर्नुहोस् । "अन्तिम नाम" दोहोर्याउनुहोस्।
कागजातमा, दुई फाँटहरूको बीचमा कर्सर राख्नुहोस्, स्पेस थिच्नुहोस्, र फर्कनुहोस् फाँटहरू संवादमा:
क्लिक गर्नुहोस् प्रकार्य ट्याबहरू, र क्लिक गर्नुहोस् "Conditional text"प्रकार सूचीमा.
अवस्था बाकसमा, टाइप गर्नुहोस्: "Addressbook.addresses.firstname".
पछि बाकसमा, स्पेस टाइप गर्नुहोस् र छोड्नुहोस् Or बाकस खाली.
पहिलो नाम फाँटको सामाग्रीहरू सँग आधारितमा अब तपाईँं पाठ घुसाउन अवस्था प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ.
फाँटहरू संवादमा, क्लिक गर्नुहोस् प्रकार्य ट्याब.
प्रकार बाकसमा, क्लिक गर्नुहोस् "Conditional text".
अवस्था बाकसमा, टाइप गर्नुहोस्: ठेगानापुस्तिकाहरू.ठेगानाहरू.पहिलोनाम == "Michael"
पछि बाकसमा, टाइप गर्नुहोस् "Dear".
Or बाकसमा, टाइप गर्नुहोस् "Hello".
Title is: परिभाषित अवस्थाहरू